tvOS 11.3 beta 4 yevagadziri inowanikwawo | Ndinobva mac
Vhiki re beta shanduro uye nekuwedzera kune shanduro dzeIOS uye macOS, vakomana veCupertino vakatanga zvakare iyo tvOS 11.3 beta yechina yevagadziri. Mune ino gadziriso zvinoita sekunge Apple inogadzirisa mamwe matambudziko akataurwa mushanduro yapfuura.
Mune ino kesi kugadzirisa uye kugadzirisa kunoitwa mune ino vhezheni uye zvakare mukati meiyi nyowani beta vhezheni AirPlay 2 tsigiro yakaitwa mune yekutanga beta vhezheni inotarisirwa kudzoka uye kubviswa neApple mu beta 3. Izvi zvaizovandudza zvakanyanya bhokisi repamusoro reKutsigira kweKeKit, asi izvi zvakamiswa kwechinguva saka zvichave zvakakodzera kuti uone kana zvikaitwa zvekare kana kwete.
Mune ino kesi tvOS haiwedzeri shanduko dzakawandisa padanho rinoshanda, asi isu tine chokwadi chekuti kunatsiridzwa kunoitwa padanho rehurongwa kwakakosha. Tinofanira kutaura kuti Apple TV ichiri chigadzirwa chakasarudzika nekambani ine apple yakarumwa, kunyange chiri chokwadi icho yechina uye yechishanu vhezheni yemidziyo (iyo yekupedzisira ine 4k rutsigiro) Vakaipa kuwedzera mukutengesa.
Iye zvino vagadziri vatove nemaoko avo anotevera beta vhezheni, iyo inosvika mavhiki maviri mushure mekutanga yakatangwa uye zvinotarisirwa kuti nezhizha rino paWWDC chishandiso uye kunyanya software yayo icha "sungisa nzungu zvishoma" kunyanya nyaya ye imba yakangwara ine HomeKit, chimwe chinhu chaanotoita mushe nhasi asi icho chinogona kuvandudzwa neAirPlay 2. Muchiitiko chekuti ivo vanogadzira vawane shanduko yakakosha, isu tichagovana newe mune ino chinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » tvOS 11.3 beta 4 yevagadziri inowanikwa zvakare